MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA EE LOO YAQAAN 'CATAHOULA BULLDOG DOG' - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee loo yaqaan 'Catahoula Bulldog Dog'
Louisiana Catahoula Leopard Dog / eeyaha Bulldog isku dhafan oo Mareykan ah
'Lexi, haweeneyda Catahoula Bulldog ee jirta 15 bilood waa jacayl, ku mashquulsan kubbadda, waxayna jeceshahay dabaasha iyo soo qaadashada. Wax yar ayey ka xishoonaysaa dadka cusub, waana inay haysataa wakhti ay kula qabsato ka hor inta aaney cidna u oggolaan inay iyada salaaxdo, laakiin weligeed dagaal kama hayso arrintaas. Iyadu sidoo kale aad ayey u firfircoon tahay, waxayna noqon kartaa mid wax cuna marka aysan tamarta oo dhan ka bixin. Iyadu waa qof aad u caqli badan, oo waxyaabo ayay ku qaadataa waqtiga rikoodhka. '
i tus sawir Terrier dibi ah
Mastahoula Mareykan ah
The Catahoula Bulldog ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Louisiana Catahoula Leopard Dog iyo Bulldog Mareykan ah . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Bullaugga Catahoula wuxuu leeyahay maqaar ciriiri ah iyo jaakad aad u gaaban oo jilicsan. Xaaladaha badankood Catahoula ma laha jaakad hoosaad laakiin waxaa laga yaabaa inay horumariso mid haddii ay ku nooshahay jawi xilliyeed ama qabow. Dheguhu waxay ku yimaadaan nuuca loo yaqaan 'rose' ama badhanka oo mararka qaarkood waxaa loo jarjaraa muuqaal sharaf leh. Midabka indhuhu wuxuu ku imaan karaa bunni, buluug baraf ah, dahab, sumurud cagaaran ama isku dar ah kuwaan oo dhan. Koofiyaduhu waxay ku yimaadaan noocyo kala duwan oo midabyo ah min meeris ilaa caddaan saafi ah.
The Catahoula Bulldog waxay u egtahay inay tahay eey gadaal loo dhigay laakiin way feejignaan kartaa marka loo baahdo. Caqli badan oo sahlan in la tababaro, waa kuwo daacad ah oo jecel inay la joogaan qoyskooda. Eygan wuxuu jecel yahay inuu ka farxiyo waana in la baro waxa laga filayo iyaga goor hore. Aad bay ugu dulqaataan carruurta. Bulshadda loo yaqaan 'Catahoula Bulldog' waxay u egtahay inay dhagaha u adeegsato si aad u muuqata, sida inay iyaga la hadlayaan. Wuxuu sameeyaa saacad weyn ama eey waardiye ah. Waxaa mararka qaarkood loo isticmaalaa ugaarsiga iyo ugaadh geedka.
Dhererka: 24 - 26 inji (61 - 66 cm)
Miisaanka: 75 - 100 rodol (34 - 46 kg)
Guriga dhexdiisa kuma fiicnaan doono haddii si ku filan loo jimicsado.
Bulshooyinka Catahoula waxay u baahan tahay in lagu qaato a socod maalinle ah .
Baahida haynta caruurtu waa yar tahay. Waa inay qubaystaan ​​dhowr jeer sanadkii (illaa ay wax galaan oo wasakh yeeshaan mooyee) iyo cadayasho wanaagsan usbuucii hal jeer. Ciddiyaha waa in si joogto ah loo jarjaraa oo ilkaha la nadiifiyaa. Noocani waa celcelis ilaa iftiin daadinta joogtada ah. Markaad dareento walwal ama walaac, waxay u janjeeraan inay wax badan daadiyaan, gaar ahaan markaad salaaxayso.
Isku darka 'Catahoula Bulldog' wuxuu jiray in ka badan 100 sano waxaana hadda badanaa lagu dhalaa Catahoula Bulldog ilaa Catahoula Bulldog. Waa eey aad u da 'weyn oo Mareykan ah oo laga isticmaalo Koonfurta. Ma jiraan wax diiwaanno wanaagsan ah oo iyaga lagu hayo. Magaca Catahoula wuxuu ka yimid eray Hindi ah oo macnihiisu yahay biyo nadiif ah.
Cirka Skyhoula Bulldog at 7 sano jir ah— 'Kani waa haweeneyda Catahoula Bulldog. Waxay leedahay hal indhood oo buluug ah iyo mid bunni ah. Iyadu waa eeyga ugu fiican ee aan abid yeesho, shaqsiyad weyn, deggan eey wanaagsan oo deggan. Wuxuu jecel yahay kubbadaha teniska laakiin si fudud loo dejiyo. Ey guri weyn, ku weyn xoolaha, layaab leh caruurta . Qof kastaa wuxuu rabaa inuu iga xado, lol. Waxay tahay 55 rodol oo cajiib ah. '
Lexi haweeneyda reer Catahoula Bulldog ee jirta 15 bilood
'Kani waa Colt. Waa 9 bilood jir Catahoula Bulldog. Wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro ... wax kasta! Runtii dib ayuu u dhigay, gaar ahaan eeyaha yar yar! Wuxuu wax weyn ka qabtaa carruurta iyo eeyahayaga kale, xitaa eeyaha xaafadda! Wuxuu jecel yahay yarkiisa yar ee Ryver, oo ah Bulldog Mareykan ah inkasta oo ay jirto 5 bil kala duwanaanshaha da'da waxay u dhaqmaan sida mataanaha! '
Kuuley Bulldog Catahoula 9 bilood jir
75-lb. haweeney Catahoula Bulldog oo loo bixiyay Delta
'Tinkerbelle, eey yar yar oo loo yaqaan' Catahoula Bulldog 'waa mid isku duuban oo leh dhibco Irish ah iyo a isha buluug ah iyo il cagaaran! Waxay ka timid qashinkeenii ugu dambeeyay iyaduna waa caruusad! ' Lahaanshaha sawirka Wilsons Kennels
'Kani waa saaxiibkeyga ugaarsiga ah ee 1-iyo-jirka ah Reese. Isagu waa Buluugi Catahoula ah oo leh midabbo u gaar ah oo aan ku dhex arkay. Way adag tahay in sawirka laga sheego, laakiin isagu waa midabka subagga looska iyo shukulaatada dhammaantood la isku qasan yahay, iyadoo silsilad shukulaato madow ah dhabarka ka hooseyso, iyo wajiga iyo lugaha shukulaatada mugdiga ah (sidaa darteed waa magaca Reese), iyo 3/4 dhegaha. Wuu ku ciyaari karaa ardaaga oo aad ayuu u ilaalin karaa gabdhahayga isla waqtigaas, laakiin saaxiibtinimo ayuu u leeyahay martida 'la casumay' sidoo kale. Isaguba waa ugaarsade aad u dagaal badan oo hoos udhaca oo wasakh noqda sida mid ka mid ah eeyaha ugu qabashada fiican ee aan aqaano, kaas oo sidoo kale raadin kara doofaarka.
Qashin-ka-soo-baxa Puyog Buldaug - 'The Catahoula Bulldog waa iskutallaab la aqoonsan yahay oo udhaxeysa Eyga loo yaqaan' Louisiana Catahoula Leopard Dog 'iyo' Bulldog American '. Waa eey aad u da 'weyn oo Mareykan ah oo loo isticmaalo Koonfurta si looga shaqeeyo, ugaadhsiga iyo ilaalinta qoyska / hantida iyo waliba inuu noqdo wehel daacad ah. Eeyaheena ayaa ka diiwaan gashan Hay'adda Cilmi-baarista Xayawaanka (ARF), oo ah kan ugu da'da weyn diiwaangelinta. Eydu waxay ku imaan karaan noocyo kala duwan oo midabayn ah laga bilaabo meeris ilaa caddaan iyadoo indhaha ay yihiin bunni, cagaar, buluug baraf, dahab, ama isku dar ah kuwan. Kaliya maahan eeyahaani kuwo aad u fiican oo dhan eeyaha hareeraha ka jira, laakiin runti way qurux badan yihiin in la fiiriyo qaansoroobaadkooda midabaynta. ' Waxaa iska leh Waller's Freedom Kennels
Catahoula Bulldog, Sawirka waxaa iska leh Waller's Freedom Kennels
Delta ee Catahoula Bulldog
'Tani waa tusaale qurux badan oo ah F1 Catahoula Bulldog. Kani waa Wilson's Shugah. Iyadu waa eey cajiib ah, oo madadaalo ka buuxo! Waxay jeceshahay carruurta oo ay la ciyaarto eeyaha kale. Waxay si gaar ah u jeceshahay eeyo. Iyadu aad bay u hooyo tahay, oo way nadiifin doontaa eeyda yar yar iyagaana xannaaneyn doonta, inkasta oo ayan iyagu ahayn kuwa ay iyadu leedahay! Iyadu waa Bombkii! Lahaanshaha sawirka Wilson's Kennels
El Capitan's Oakey the Catahoula Bulldog
'9-toddobaad jir ah merle Catahoula Bulldog eeyo yaryar oo ka yimid qashinkeenna bishii Maarso 2007-badankood ardaydan ayaa leh indho muraayad buluug / cagaar ah dillaacay.'
9-toddobaad jir ah merle Catahoula Bulldog eey
Qashin 9-toddobaad jir ah oo merle ah Catahoula Bulldog
4-jir merle Catahoula Bulldog eey
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ku saabsan Bulshugga Catahoula
Catahoula Bulldog Sawirada 1
Liistada Louisiana Catahoula Leopard Dog Isku Darka Eeyaha
midab adhijirro yar yar oo Ameerikaan ah ayaa midabbada madow leh
sawirada olde somali bulldogs
yorkie oo dhalaya eeyo
isku darka adhijirka adhijirka ah ee reer beljumanka malyumia